सभामुखले गुरिल्ला स्टाइल देखाएः एमाले – Bikash Khabar
शनिबार, २६ भाद्र २०७८ गते ६:०६ मा प्रकाशित	Author Pradip Adhikari	Comment(0)	108 Views
२६ भदौ,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा विरोध गरिरहने जनाएका छन् ।
‘त्यो कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । उहाँले त्यो काम गर्नुभएन । हाम्रो विरोध त्यसप्रति हो । यतिसम्म असहिष्णुता देखाइसक्नु भएको छ कि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसका सदस्यहरुलाई समेत कार्यसूची र एजेन्डा दिनुहुन्न, यसरी उहाँले संसद कसरी चलाउनुहुन्छ रु हामीले अवरोध गर्न खोज्या हो र ? उहाँको तरिका गलत भयो त्यसको विरोध गरेको हो, प्रतिवाद गरेको हो,’ बाँस्कोटाले भने । राजधानी दैनिकबाट
११ साउन, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत लिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र
७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा बिस्तार, कुन-कुन स्थानीय तहमा बाँकी?
काठमाडौं, ०१ जेठ । मुलुकभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब तीन मात्रै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका
१४ माघ,काठमाडौँ । कालीकोटमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला बाहिरबाट इँटा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि यहाँ इँटा उद्योग